Ireo Famonoana Tsy Mandal Fitsaràna ao Filipina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2018 12:46 GMT
Iray amin'ireo fototry ny fitarainana amin'ny fiampiatoana amin'ny asany ny Filoham-pirenena Filipiana, Gloria Macapagal-Arroyo, ny fandrisihany famonoana politika tao amin'ny firenena.
Nampangain'ireo vondrona mpiaro zon'olombelona Ramatoa Arroyo ho anisan'ireo olon-dratsy indrindra mpandika ny zon'olombelona teo amin'ny tantara maoderin'ny firenena.
Vao haingana, nanao fanentanana ady tsy misy indrafo mba handresena ny Kaominista mpikomy antitra indrindra tao Azia i Rtoa. Arroyo. Nitondra tany amina fakàna an-keriny maromaro, fandrahonana sy famonoana olona tsy manan-tsiny sy olon-tsotra tsy mitam-piadiana maro tany amin'ny faritany ity politika ity.
Maneho alahelo amin'ity fanitsakitsahana ny zon'olombelona manaraka ity i Adin-tsaranga:
“Mpikambana anatinà fikambanana ara-dalàna avokoa no eo antampon'ny lisitry ny Bakon'Ady (ao amin'ny miaramila) izay fantatra noho ny fomba fijeriny manakiana ny governemanta. Misy ny ezaka haampangiana ny hetsi-panoherana amin'ny famonoana sy ny fakàna an-kery ireo mpitarika sendikàn'ny mpiasa sy ireo mpikarakara ny fiarahamonina tambanivohitra.”
Gaga i Anon Y. Mous hoe nahoana ireo ”fiangonana evanjelika no toa mangina foana” na misy aza ireo famonoana eo amin'ny firenena. Diso fanantenana i Reds Care amin'ny hoe na ireo mpikambana ao amin'ny Antoko Mpanohitra ara-politika aza dia ”hazan'ny fikatsohana kaoministy ny governemanta.” Mamaritra ny heloka bevava lehibe indrindra nataon'ny governemanta ankehitriny i Teridon.
Soratan’ i Adarna’s Attic ny mikasika ny fanapahankevitry ny Fitsarana Antampony mibaiko ireo miaramila sy ilay Jeneraly Lehibe mahabe resaka, Jovito Palparan, hampanjavonana mpianatra roa tsy ho hita. Manana fampidirana am-blaogy mikasika ny fanjavonan'ireo tanora roa mpikatroka ireo i Solar Power . Sarah Raymundo tamin'ny fidiran'ny vondro-miaramila tantsambo Filipiana tao amin'ny oniversitem-panjakana iray.
Maneho ny heviny mikasika ilay tatitra nataon'ny Amnesty International momba ny toe-javatra mikasika ny zon'olombelona any Filipina i Carol Araullo :
“Raha tsy hoe mahita fomba hahafahana mampiditra fisalsalàna amin'ny tatitry ny Amnesty International angaha ireo zazalahy matsilon'i Arroyo ( Filoha), angamba amin'ny fametahana azy toy ny vokatry ny ezaka fampielezan-kevitra nataon'ny Ankavia, dia tsy misy afa-tsy ny fijanonan'ireo famonoana sy ny famaizana ireo nahavanon-doza no ahafahana manohitra ity fiampangana farany natao tamin'ny fitondran'i Arroyo ity.”
Hazavain’ i Gerry Albert Corpuz ny antony mahatonga azy tsy manohana ny komisionam-panjakana mba hanadihadihana momba ireo famonoana ara-politika:
”Tsy hiara-hiasa amin'ny iray amin'ireo fanadihadiana momba ny famonoana ara-politika tarihan'ny Lapa izahay. Tsy hifampiraharaha amin'ireo lohan'ireo famonoana miisa 728 tsy nandalo fitsaràna izahay.”
Ampifandraisin’ i Tingog Katawhan izany amin'ny lahatsoratra an-gazety iray momba ny ankizy ampijalian'ireo miaramila. Mandinika i Promdi fa hatramin'ny toerana tamin'ny kabarin'ny Filoha nataony ho an'ny vahoaka (tamin'ny volana lasateo), ”efa saika ho isanandro vaky no itrangan'ireo famonoana mpikatroka.”